धनगढीकै प्रख्यात श्री त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् एक छात्र समेत पक्राउ – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
धनगढीकै प्रख्यात श्री त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् एक छात्र समेत पक्राउ
२०७४, १० पुष सोमबार ०९:०१
रञ्जित लामा, धनगढी । समूहगत चोरी गर्ने गिरोहलाई कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले चोरी गर्ने ६ जनाको समूहलाई शुक्रबार धनगढीबाट पक्राउ गरेको हो । चोरी आरोपमा पक्राउ पर्नेहरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का १६ वर्षीय सिर्वन कुँवर, कैलारी गाउँपालिका–२ का १६ वर्षीय गोपाल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिका–५ का १५ वर्षीय गौरव चौधरी, अछाम बाप्ला घर भएका १४ वर्षीय कमल बटला, डडेल्धुरा पर्शुराम नगरपालिका जोगबुढा घर भएका १४ वर्षीय दिपेन्द्र शाही राउटे र बर्दिया राजापुर नगरपालिका–४ का १५ वर्षीय शंकर चौधरी रहेका छन् ।
गिरोहबाट विभिन्न कम्पनीका ५ थान मोबाईल फोन, चार्जर र एयरफोन बरामद गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक बीरबहादुर बुढा मगरले बताए । चोरी आरोपमा पक्राउ परेका शंकर चौधरी धनगढीकै ख्याती प्राप्त श्री त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् छात्र हुन् ।
चौधरी बिगत केही समयदेखि ‘आमाको माया छात्राबास’ मा रहेर कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै आएका छन् । गत मंसिर २७ गते राती धनगढी उपमहानगरपालिका–१, एल.एन. चोक स्थित आशीष मोबाईल ग्यालरीबाट ८ लाख बराबरको बिभिन्न कम्पनीका २१ थान मोबाईल फोनहरु र केही नगदसमेत चोरी भएको थियो ।
त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयको हाताबाटै भ्यान्टिलेसन भाँचेर मोबाईल पसलमा लगाएको पलाईउड भित्र पसेर गिरोहले चोरी गरेका थिए । चोरी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले चोरी भएको नवौं दिनमै पक्राउ गर्न सफल भएपनि चोरी नहुने कुरामा स्थानीयहरु ढुक्क हुनसकेका छैनन् । सुरक्षा संयन्त्रमा बलियो मानिएको धनगढीको एल.एन.चोकबाटै चोरी हुनथालेपछि स्थानीयमा एककिसिमको सन्त्रास नै उत्पन्न भएको छ । प्रहरीको गस्ती २४ सैं घण्टा रहने र वडादेखि जिल्ला कार्यालय पनि नजिकै रहेको स्थानबाटै यसरी लाखौंको चोरी हुनुथालेपछि प्रहरीको सुरक्षा संयन्त्रप्रति स्थानीयले अविश्वास प्रकट गर्न थालेका छन् ।
माथिका घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटानाहरु विगत केही महिना यता कैलालीको धनगढीमा निकै वृद्धि भइरहेको छ । समूहगत चोरी गर्ने गिरोहको सक्रियता देखिएको छ । दिउँसै र रातमा चोरीका घटनाहरु क्रमागत रुपमा बढ्दै गएका छन् । धनगढीको एल.एन. चोक स्थित श्री त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय र लक्ष्मीनारायण मन्दिर आसपासको क्षेत्रहरुमा लागुपदार्थको दुब्र्यसनीहरुसमेत भेटिने गरेको श्रोतले बतायो । ती दुब्र्यसनीहरुबाट सर्बसाधारण लुटिने, कुटिने र चोरीका घटनाहरु भइरहेको श्रोतको दाबी छ । यसरी लागूपदार्थको दुब्र्यसनी र चोरीका घटनाहरु बृद्धि हुदै गए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । लागू औषध दूब्र्यसनी र चोरीका घटनाहरुमा बालकको संलग्नता देखिनुले अहिले थप चिन्ता बेढेको छ ।
छोटो समयमै सम्पन्न र सफल बन्ने लालसा र छिट्टै आवेगमा आउने प्रवृत्तिले किशोरहरूलाई अपराधको अँध्यारो बाटोतर्फ डो¥याउँने विश्लेषक बताउँछन् । सो घटनामा पक्राउ पर्ने सबै १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालक रहेका छन् । देश निर्माण र रचना सृजनामा संलग्न हुनुपर्ने युवाहरु नै यसरी चोरीमा संलग्न हुनथालेपछि कैलालीको भविष्य के होला भनेर स्थानीय बुद्धिजिबीहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।